Amaan noqo markaad lacag u dirayso - Amjambo Africa
Dad badan ayaa u baahan inay lacag u diraan guriga si ay u caawiyaan kuwa ay jecel yihiin. Nasiib darrose, mararka qaar lacagta adag ee la kasbaday ma garto qofka saxda ah. Khayaanada ayaa jecel macaamilka xawaaladaha maxaa yeelay waxay siisaa iyaga hab dhaqso leh oo fudud oo ay lacag ku helaan. Akhriso si aad ubarato talooyin ku saabsan sida loo hubiyo in lacagtaadu ay aman tahay oo ay gasho gacmaha midig ee gurigaaga.
Waa kuwan qaar ka mid ah tilmaamaha guud ee ku saabsan ilaalinta lacagtaada oo aaminah
• Marna ha siinin macluumaad shakhsi ahaaneed sida lambarkaaga sooshal sekuuritiga, lambarrada koontadaada, ama macluumaadka bangigaaga kuwa soo wacaya ee aan la weydiin ama qofna qoraal ama emaylka.
• Hubso in aaladaha elektarooniga ah la cusbooney siiyay oo amaan ah.
• Hubso in khadka internetka ee aad isticmaaleyso uu amaan yahay.
• Waligaa lacag ha ugu dirin qof aadan aqoon.
• Hubso warbixinnada maaliyadeed si joogto ah si aad uqabsato macaamil ganacsi shaki leh.
Halkan waxaa ku yaal tilmaamo guud oo ku saabsan ilaalinta lacagtaada oo ammaan ah
Halkan waxaa ku yaal talooyin ku saabsan ikhtiyaarrada xawaaladaha kala duwan trans Wareejinta siliga ee hay’addaada maaliyadeed Ururada amaahda iyo bangiyada ayaa kaa caawin kara inaad lacag ku wareejiso wareejinta siligga, codsiyada qofka-qof, iyo in ka badan. Xawilaadaha bangiga iyo ururada amaahdu aad ayey u sugan yihiin maxaa yeelay lacagaha waxaa laga wareejiyaa hal bangi oo loo wareejiyaa mid kale, oo leh lakabyo ammaan oo la dhisay. Soo dirahayaashu waxay ubaahan yihiin inay xaqiijiyaan nambar ka marinka ay isticmaalayaan mararka qaarkoodna bangiyada waxay leeyihiin lambar wadooyin kaladuwan oo loogu talagalay gudbinta, sida lambarka SWIFT. SWIFT waxay u taagan tahay Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, taas oo macnaheedu yahay koodhku wuxuu u eg yahay lambar marin caalami ah.
Shirkadaha xawilaadda siligyada Shirkadahaan (sida Western Union ama MoneyGram) waxay ka caawiyaan isticmaalayaasha inay isdhaafsadaan lacagta ayna diraan lacag, gudaha iyo caalamkaba. Intooda badan adeegyadan ayaa ah kuwa qatar ku ah ka hortaga khayaanada waxay leeyihiin qeyb ka mid ah boggooda internetka oo loogu tala galay inay wax ku bartaan macaamiishooda si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda.
Barnaamijyada taleefannada: Barnaamijyada sida PayPal, Google Pay, iyo Venmo way fududahay in la soo dajiyo waxaana loo isticmaali karaa in lacag loogu diro asxaabta. Way ku habboon yihiin oo dhakhso badan yihiin, badiyaaana waa bilaash, laakiin way fududahay in khaladaad la sameeyo oo lacag loo diro qofka qaldan. Waxaa jira xulashooyin aad u yar oo khilaaf ah haddii ay dhacdo qalad ama macaamil ganacsi been abuur ah.
Xisaabaadka Bangiga ee xawaaladaha: Dadka qaarkood waxay sameystaan ​​xisaab bangi oo labaad, oo ka duwan koontadooda caadiga ah ee bangiga, kaliya lacag loogu diro guriga. Marka hore, tani waxay qaadataa shaqo dheeri ah, laakiin marka nidaamka la dejiyo, waxay ku haysaa lacagta akoonkaaga caadiga ah mid aamin ah. Haddii uu jiro wax isdabamarin, khayaanada ayaan heli doonin lacagtaada oo dhan.
PreviousMuraayadaada muraayadda waa wax ka badan quraarada!
NextXusuusnow is daryeelid adiga oo caawinaya kuwa kale